Samsung Galaxy F62 enweela ụbọchị ọ ga - ewepụta ya | Gam akporosis
N'ime otu izu Samsung ga-ewetara anyị ọhụụ ọhụụ na-arụ ọrụ ọhụụ, nke ga-amalite na nnukwu batrị nke ga-enwe ike ịnye onwe ya nke ihe na-erughị ụbọchị 2. Ngwaọrụ ahụ ga-abata Galaxy F62.
Dị ka onye na-akwụ ụgwọ Mukul Sharma si kwuo, onye wepụtara ozi banyere mkpanaka ahụ n'izu gara aga, smartphone ga-eweta arụmọrụ ka mma karịa ndị ahụ nwere Snapdragon 765G, yabụ atụmanya ndị metụtara ụdị a dị elu., Ma ọ bụghị obere.
Samsung Galaxy F62 enweela ụbọchị ọ ga-ewepụta ya
Dabere na ihe ndepụta Geekbench gosipụtara banyere Samsung Galaxy F62, Onye na-emepụta ihe eji eme ihe na South Korea nke Exynos 9825 ga-abụ onye ga-ebi n'ime afọ nke ama ama, iji mee ka ọ rụọ ọrụ yiri nke nke akara ngosi 10 nke Galaxy Note nke 2019, nke ebuputere n'oge ahụ site na iji chipset processor. Ozi FlipKart gosipụtara nke a, yabụ o yiri ka ọ doro anya na ọnụ ahụ ga-abịa na SoC ahụ e kwuru na mbụ.
Banyere ihihi ọzọ, ọ ga-abịarukwa ihe ngosi AMOLED teknụzụ nke nwere diagonal nke ihe dịka sentimita 6.7, ya mere na nke a abụghị obere ngwaọrụ. N'aka nke ya, batrị ikike 7.000 mAh ga-adaba na teknụzụ na-ebu ngwa ngwa site na ọdụ USB-C, mana nke a bụ ihe anyị na-enweghị ọtụtụ nkọwa gbasara.
A ga-ebido ekwentị ahụ na 8 GB Ram, 128 GB ohere nchekwa dị n'ime, Android 11 dabere na One UI 3.1, kamera 32 MP n'ihu yana usoro 64 MP n'azụ igwefoto quad.
Na Febụwarị 15 anyị ga-akwado ihe niile ekwuru. N’ụbọchị ahụ, a ga-ewepụta Samsung Galaxy F62 na India.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Samsung Galaxy F62 nwere batrị 7000 mAh ga-ebido na February 15